I-IPFS: Ungayisebenzisa kanjani i-Interplanetary File System ku-GNU / Linux? | Kusuka kuLinux
Njengamanje, upheqa ku I-inthanethi (Cloud / Web) isuselwe ikakhulu, ngaphansi kwe- Isidlulisilwazi kuwebhu (HTTP), okungukuthi, HTTP umthetho olandelwayo wenethiwekhi osetshenziswa emhlabeni wonke ukuhlola ifayela le- Iwebhu Yomhlaba Wonke (WWW). Kusukela ngosuku lwayo lokudala (1989-1991) futhi ngenkathi ikhona, ibe nezinguquko eziningi noma izinguqulo. I-HTTP 1.2, yayisebenza iminyaka engu-15, kuze kube I-HTTP 2, yakhululwa ngoMeyi 2015. Futhi mhlawumbe manje, I-HTTP 3 akhululwe kungekudala.
Kodwa-ke, kunezinye izinqubo ezihlukile, ezintsha nezithakazelisayo ekwakhiweni. Enye yazo I-IPFS okuncike ku Iphrothokholi ye-P2P hypermedia (Peer-to-Peer - Person to Person), futhi yenzelwe ukwenza i- iwebhu esheshayo, ephephile futhi evulekile ngokwengeziwe.
Kwiposi langaphambilini, elibiziwe "IPFS: Uhlelo Oluthuthukile Lwefayela olune-P2P neBlockchain Technology" Siphawula ngakho ngokuningiliziwe: Iyini i-IPFS, ineziphi izici, isebenza kanjani ?, phakathi kwezinye izinto. Ngakho-ke, okulandelayo kufanele ukucaphuna kafushane kukho:
"... I-IPFS ingagcwalisa noma ifake esikhundleni se-Hypertext Transfer Protocol yamanje (i-HTTP), okuyiyona eyenza njengamanje ukudluliswa kolwazi efwini (iwebhu) ezingeni lomhlaba jikelele. Ngakho-ke, i-IPFS ihlose ukuguqula ukusebenza kwamanje kwe-Intanethi kusekelwe kumaseva aphakathi nendawo kube iwebhu esatshalaliswa ngokugcwele ngaphansi kweP2P Technology neBlockchain. Ukuze ube uhlelo lwefayela olusatshalaliswa, olunezinkomba namafayela, angaxhuma wonke amadivayisi wekhompyutha nokuqukethwe kwedijithali, emhlabeni jikelele, ngohlelo olufanayo lwefayela".
Okwamanje, manje sizogxila kwi ukufakwa nokusetshenziswa, kusuka kwakhe Iklayenti Elisemthethweni ukuze I-GNU / Linux.
1 Ungayisebenzisa kanjani i-IPFS - Uhlelo Lwefayela Lokuplana?
Ungayisebenzisa kanjani i-IPFS - Uhlelo Lwefayela Lokuplana?
Landa iklayenti ipfs-desktop i-del Iwebhusayithi esemthethweni. Ngesikhathi sokubhala i-athikili, uhlobo olutholakalayo yi- 0.10.4, futhi itholakala ngala mafomethi alandelayo:
Uhlelo Lokusebenza: ipfs-desktop-0.10.4-linux-x86_64.AppImage
Kanye ukulandwa, kithi ifayela ipfs-desktop-0.10.4-linux-amd64.deb, siqhubeka ukuyifaka ngomyalo olandelayo:
I-sudo dpkg -i ipfs-desktop-0.10.4-linux-amd64.deb
Qalisa «Cliente de escritorio IPFS Desktop» kusukela Imenyu enkulu, etholakala engxenyeni ye-Inthanethi. Uma ingasebenzi ngokugculisayo, zama ukwenza le miyalo elandelayo:
sudo apt ufake -f
Faka ifayela ku- Inethiwekhi ye-IPFS kusukela «Cliente de escritorio IPFS Desktop», kusuka esigabeni "Amarekhodi" nokusebenzisa inkinobho "Faka ku-IPFS". Kusuka kuyo, ungalayisha amafayili kanye / noma amafolda (ama) ngqo kusuka kukhompyutha noma ngomzila wewebhu I-IPFS. Futhi, amafolda angakhiwa kufayela le- «red IPFS» Ukusuka lapho.
Thola bese wabelana nge i-hash noma indlela ephelele ye-ipfs yefayela (ama) kanye / noma amafolda (ama) ilayishiwe, phakathi kwabasebenzisi benethiwekhi abafisa ukuyifinyelela, ngokusebenzisa i- Imenyu yamaphoyinti amathathu (…) ehambisana nento ngayinye elayishwe kufayela le- «red IPFS».
Hlola ukufinyelela kwefayela le- amafayili kanye / noma amafolda (ama) ilayishiwe, kusetshenziswa isiphequluli sewebhu kanye ne indlela ephelele ipfs okutholakele. Okungaba ngokwesibonelo, ukuthi iqukethe ifayili le- Ifayela levidiyo le-17MB engikulayishile, njengesiboniso se-athikili:
Ngokufingqa, njengoba ubona inqubo ilula, futhi ifayela le- «red IPFS» ilungele isib. ukulayisha nokwabelana ngezinsizakusebenza amafayili kanye / noma amafolda (ama) lokho ngezinye izindlela, akukwazanga ukwabiwa ngenxa yokungavumelani kwamafomethi, umkhawulo wosayizi noma amabhulokhi wokuqukethwe athile.
Siyethemba lokhu "okuthunyelwe okuwusizo okuncane" ngokuthi ungayisebenzisa kanjani leveli engajwayelekile nenoveli Uhlelo Lwefayela Leplanethi owaziwa ngaphansi kwegama le- «IPFS», enikeza a Iwebhu esatshalalisiwe, ngaphansi kwe- Iphrothokholi ye-P2P hypermedia ukukwenza iyashesha, iphephe futhi ivuleke ngokwengeziwe, ukuthi okwendabuko, kunesithakazelo esikhulu nokusetshenziswa, kwabo bonke «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» kanye negalelo elikhulu ekusabalalisweni kwemvelo emangalisayo, enkulu futhi ekhulayo yezicelo ze «GNU/Linux».
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Okokufundisa / okwenziwa ngesandla / Izeluleko » I-IPFS: Ungayisebenzisa kanjani i-Interplanetary File System ku-GNU / Linux?